Apple dia namoaka Beta fahefatra an'ny OS X 10.11.4 ho an'ny Developers | Avy amin'ny mac aho
Herinandro iray hafa dia afaka miteny isika fa ireo avy any Cupertino dia mifanohitra amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny kinova OS X 10.11.4 vaovao ary io beta fahaefatra io dia natao ho an'ny mpamorona miaraka amin'ny fanatsarana lehibe. ny beta fahatelo an'ny mitovy Navoaka tamin'ny 8 febroary izy io ka tapa-bolana monja.
Averina indray fa matoky izahay fa manomana ny làlana i Apple ka amin'ny volana manaraka dia hahita ny jiro ny kinova manaraka amin'ny rafitra Mac ary ho tonga amin'ny Jona ny fitaovana vaovao. Ankoatr'izay dia miasa mafy izy ireo mba hiasa tsara kokoa sy tsara kokoa ny tontolo iainana amin'ny lafiny vaovao fanampiana izay namboarina tamin'ny fahatongavan'ireo iPhone 6s sy 6s Plus, sary mivantana.
Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny OS X 10.11.4 ho an'ireo mpamorona voasoratra anarana tapa-bolana taorian'ny namoahana ny beta fahatelo. Hitanay fa manaraka tsara ireo fandefasana izay manamarina izany Ao amin'ny Keynote manaraka izay tsaho momba ny 15 martsa, hanana ny rafitra vaovao eny an-dalambe isika.
Ho fanampin'izay, io kinova vaovao an'ny OS X io no hampiditra kinova iTunes vaovao mety hiteraka fisarahana amin'ny serivisy Apple Music, mamela ny iTunes ho amin'izay nokasaina voalohany, izany hoe hampifangaro votoaty. Ity beta vaovao ity dia mifantoka amin'ny fampiharana marina ny Live Photos in Messages ary koa ny fanatsarana ny fitoniana.
Rehefa navadiky ny mpamorona ny zavatra hitany tamin'ity beta vaovao ity dia hampahafantarinay anao ny momba azy ary toa izany tokoa fa ny fampiharana Notes dia hitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny kinova OS X El Capitan vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny OS X 10.11.4 ho an'ny mpamorona
Tonga ny hackintosh miaraka amina famolavolana cylindrical an'ny Mac Pro sy ny Dune Case